Ma maqashay nabi Maani? – Kaasho Maanka
Maani Bin Futk (216-274 CD) wuxuu ku dhashay Baabil oo ahayd deegaan ay ka asaasmeen kana jireen ilbaxnimooyin waaweyn oo aduunka soo maray.
Maani yaraantiisu wuxuu ku koray nolol aad u dhib badan waxaana laga qaaday isagoo aad u da’ yar hooyadii, aabihii ayaana kula biirey koox diimeed kale, koox diimeedkaas oo caan ku ahayd u ban-baxa cibaado iyo ka dheeraanshaha adduunyada.
Taasi waxay u fududaysay in uu wax badan ka barto diimaha berigaa ka jirey deegaanka Baabil oo xilliyada qaar ka tirsanaa boqrtooyadii baaxadda weynayd ee Beershiya.
Maani muddo kadib wuxuu sheegtay Nebinimo iyo in ilaahay farriin ugu soo dhiibey dadkii waagaa noolaa. Maani wuxuu dadkii u sheegay Markuu da’ ahaan jirey 12 dabshid in malag wax uu ku sheegay u yimid, waxaas oo ku amray inuu isu diyaariyo si uu farriinta ilaahay dadka u gaadhsiiyo.
Taarikhdu markay ahayd 241CD Maani wuxuu dadkii u sheegay in isla malagii u yimi mar labaad uuna ku amray inuu is muujiyo oo farriinta iyo sharciga ilaahayna dadka gaadhsiiyo.
Maani wuxuu sheegtay inuu yahay nebi Ilaahay soo diray welibana uu yahay kii u danbeeyey nebiyadii ilaahay soo diray, sidoo kale wuxuu dadka u sheegi jirey in diimihii xaqa ahaa ee tiisa ka horreeyey uu ilaahay laalay ama waxba kama jiraan kasoo qaaday (la nasakhay) isagoo u sababaynaya in wax ka bedel lagu sameeyey isaguna uu xaga ilaahay ka sido sharcigii iyo fariinti cusbayd ee saxda ahayad uguna danbeysey fariimaha.
Maani wuxuu kaloo ku dooday in kutubtii hore gaar ahaan kuwii Ciise isaga imaanshihiisa lagusii sheegay wuxuu kaloo ku dooday in aan ciise la dilin ee uu xaga sare u duulay, Maani nebinimadiisa dad ayaa aaminey dadka qaarna waa ka hor yimaadeen, Maani wuxuu dadkii aaminey u sheegay inay jiraan 10 Cir, 8 Dhul iyo 7 tiir ama udub dhexaad wuxuuna faray dadkii aaminey in ay ka reeban tahay oo ay xaaraan ka tahay xerta aamintey Dhagax-caabudka, Tuugada/xatooyada, Dilka, Dhabcaalnimada, Khiyaamada, Sixirka iyoKa shakiga diinta iyo nebinimadiisa.
QORMO LA XIRIIRTA: Xiriirka ka dhaxeeya diinta Hinduuska iyo diimaha Ibraahiimiyada
Sidoo kale Maani wuxuu faray xertiisii inay tukadaan maalintii afar jeer midkastaana 12 jeer madaxa dhulka la dhigayo (sujuud) ayna ka horrayso weesa-qaadasho iyadoo biyo la adeegsanayo hadii la waayana ciid. Wuxuu kaloo faray in ay soomaan, maalmaha soonka ka danbeeya waxay ahaayeen maalmo la dabaal dego hantidoodana ay wax ka bixiyaan (sadaqo), galmada dumarka ay ka dhowrsanaadaan ama iskaba dhaafan haday karaan isagoo ku tilmaamay aafo inay yihiin haweenku.
Nebi maani wuxu dadkii aaminey u kala qaybiyey laba kooxood, koox walbana wuxuu u sameeyey xeer gooni ah.
I. Dagwayn/Caamo: Kooxdani waa kooxda ay ku abtirsadaan dadka aaminey inta badan, waana kooxda ugu badan.
II. Culimo: Kooxdani waa kooxda dooran ee gaarka ah, waa culimo asxaabtii nebiga ah ama qusuusiga.
Maani waxaa u suurtagashay in uu muddo kooban ku helo dad aad u badan oo aamina ilaa maantana ay dunida ku nool yihiin dad weli aaminsan diinta maaniyada oo isaga loogu magac daray.
Diinta Maaniyadu waxay ka wayn tahay diinta Islaamka ku dhawaad saddex qarni.
Baabili Faarisiyiin Nabi Maani
1 Bil Kahor
Ma. Waa wax fiican wll
Walal mid maku waydiyaa adoo raaliya
Su,aashu waxa weeye xagee karaadshaa dhacdooyinka? waxaan leeya hay channel Waxaana rabaa inaan channel kayga kasoo daayo
Guurka caruurtii Aadam iyo Xaawo
Aadam feertiisa ayaa looga dhanbaley xaaskiisii xaawo, caruurtoodiina waa is guursadeen oo waa iska ilma dhaleen, waa sida ay diinta islaamka sheegeyso. Diimaha kale ee Ibraahimiyada iyaguna sheeko ku dhow tan ayay soo wariyeen. Dad badan oo muslimiin ah ayaa si un u dhibsadey dhigaalkeygii walow aysan doodo maangal ah oo ay iiga soo horjeedaan aysan keenin misna wayrax iyo cargaagtan ayaa iiga...